ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် - ချားလ်စ် မင်းသား ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် - ချားလ်စ် မင်းသား ကိုရိုနာ ဗိ...
25 มี.ค. 2563 - 23:14 น.
အသက် ၇၁ နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ ချားလ်စ် မင်းသား ဆီမှာ မပြင်းထန်လှတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါ လက္ခဏာ တွေ့ရပြီး လက်ရှိ သူဟာ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လျက် ရှိတယ်လို့ နန်းတွင်း ပြောခွင့် ရသူ က ဆိုပါတယ်။
ချားလ်စ် မင်းသားရဲ့ ကြင်ယာတော် အသက် ၇၂ နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ ကွန်းဝေါမြို့စားကတော် ကယ်မီလာ ကိုလည်း ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ် ကူးစက်မှု ရှိမရှိ စမ်းသပ်ခဲ့ပေမယ့် ကူးစက်ခံရတဲ့ လက္ခဏာ မတွေ့ရဘူးလို့ ပြောပါတယ်။အခုအခါ ချားလ်စ် မင်းသားနဲ့ ကယ်မီလာ တို့ဟာ စကော့တလန်က ဘုရင်မကြီးပိုင် စံနန်းတော်ရှိရာ ဘယ်မိုရဲလ် မှာ သီးခြားစီ ခွဲနေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။
သားတော်ဖြစ်သူ ချားလ်စ်မင်းသားနဲ့ မတ်လ၁၂ ရက်နေ့တုန်းက တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ ဗြိတိန် ဘုရင်မကြီးလည်း ကျန်းကျန်းမာမာဘဲလို့ ဘာကင်ဟမ် နန်းတော်ကပြောပါတယ်။ အဲဒီ တွေ့ဆုံစဉ်မှာ ဘုရင်မကြီးရဲ့ ကြင်ယာတော် အီဒင်ဘာရာ မြို့စားမင်းသားကြီး ဖိလစ် တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း မရှိဘူးလို့ နန်းတော်က ထုတ်ပြန်ပြီး အခုအခါ ဘုရင်မကြီးဟာ သူ့ကျန်းမာရေး အတွက် လိုအပ်တဲ့အကြံပြုချက်တွေ အားလုံးကို လိုက်နာလျက် ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဗြိတိသျှ အစိုးရရဲ့ အကြံပေးချက်တွေနဲ့ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းတွေအားလုံးကို ချားလ်စ် မင်းသားနဲ့ ကြင်ယာတော်တို့ လိုက်နာပြီး စကော့တလန်က စံနန်းတော်မှာ သီးခြားစီ ခွဲကာ နေထိုင်လျက် ရှိပါတယ်လို့ နန်းတော်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
စကော့တလန် မှာရှိတဲ့ Aberdeenshire အရပ်မှာရှိတဲ့ အမျိုးသား ကျန်းမာရေး၀န်ဆောင်မှုဌာန NHS က လိုအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုတွေကို လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ရေးသားထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် ချားလ်စ် မင်းသား အနေနဲ့ လတ်တလော သီတင်းပတ်တွေအတွင်း တာဝန်အရ အခမ်းအနား တော်တော်များများကို တက်ရောက်ခဲ့ရတာကြောင့် ဘယ်သူ့ဆီက ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးခဲ့ သလဲ ဆိုတာ တိတိကျကျ မပြောနိုင်ဘူးလို့လည်း ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
အိမ်ရှေ့စံ မင်းသားနဲ့ ကြင်ယာတော်တို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က စကော့တလန်ကို ရောက်လာတာ ဖြစ်ပြီး ချားလ်စ် မင်းသားဟာ လွန်ခဲ့တဲ့သီတင်းပတ် အကုန်လောက်မှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် လက္ခဏာ အပျော့စား ပြသလာတာကြောင့် မတ်လ ၂၃ရက် တနင်္လာနေ့မှာ Aberdeenshire အရပ်က ကျန်းမာရေး ၀န်ထမ်းတွေက စစ်ဆေးပေးခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ နန်းတွင်းရေးဆိုင်ရာ ဘီဘီစီသတင်းထောက် နီကိုလပ်စ် ဝစ်ချဲလ် က ပြောပါတယ်။
ဝေလမင်းသား အာရှခရီး မြန်မာမပါတော့
ဗြိတိန် တော်ဝင်မိသားစု မျိုးဆက်သစ်
မတ်လ ၂၄ရက် အင်္ဂါနေ့မှာ ဆေးစစ်ချက် အဖြေရခဲ့ရာမှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရပေမယ့် ချားလ်စ် မင်းသားဟာ ပုံမှန် အတိုင်းလုပ်ငန်း ဆောင်တာတွေကို လုပ်ဆောင်ကာ လှုပ်ရှားသွားလာ လျက် ရှိတယ်လို့ နီကိုလပ်စ် ဝစ်ချဲလ် က ဆိုပါတယ်။ အသက် ၇၁ နှစ်ရှိ အိမ်ရှေ့စံ မင်းသားဟာ မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တုန်းက မိခင်ဘုရင်မကြီးနဲ့ ခဏတဖြုတ် တွေ့ဆုံမှု ရှိခဲ့သလို အဲဒီ မတိုင်ခင်သုံးရက်လောက်ကလည်း ဓနသဟာယ နိုင်ငံများနေ့ အခမ်းအနားမှာ မိခင်ဘုရင်မကြီးနဲ့ သားတော် ချားလ်စ် မင်းသားတို့ဟာ ဖက်လှဲတကင်း နီးနီးကပ်ကပ် တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ မစ္စတာ ဝစ်ချဲလ် က ပြောပါတယ်။
ဘုရင်မကြီးလည်း ကျန်းမာပါတယ်လို့ နန်းတော်က ထုတ်ပြန်
အခုအခါ ဘုရင်မကြီးရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အလေးထား အာရုံစိုက်ကြရမှာ ဖြစ်ပြီး ကြင်ယာတော် အီဒင်ဘာရာ မြို့စားကြီး အမြဲနေထိုင်ရာ နောဖော့ခ် အရပ်က ဆန်ဒရင်ဂမ် မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်ကတည်းက ဘုရင်မကြီး ဟာပြောင်းရွေ့နေထိုင်လျက် ရှိတယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
သက်တော် ၉၀ ကျော်လာကြပြီ ဖြစ်တဲ့ ဘုရင်မကြီးနဲ့ ကြင်ယာတော် ဖိလစ်မင်းသားကြီး တို့ကို ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရခြင်း မရှိအောင် ကျန်းမာရေး အထူးကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိတယ်လို့ ဘီဘီစီ နန်းတွင်းရေးရာ သတင်းထောက်က ပြောပါတယ်။
ချားလ်စ် နဲ့ ကယ်မီလာ တို့ဟာလည်း အစိုးရက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အကြံပေးချက်တွေကို လိုက်နာ လုပ်ဆောင်လျက် သီးခြားစီ ခွဲနေထိုင်လျက်ရှိပြီး အဲဒီလိုခွဲနေလို့ ရနိုင်လောက်တဲ့ ကျယ်ကျယ်၀န်း၀န်း နေရာမှာ နေထိုင်နေကြရသူတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သူတို့ကို ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးမယ့် ၀န်ထမ်းအနည်းအကျဉ်းလည်းရှိပြီး အခု အတိုင်းဆိုရင် ချားလ်စ် မင်းသားဟာ ဗိုင်းရပ်စ်လက္ခဏာ ကင်းစင် သွားတဲ့အထိ သီတင်းနှစ်ပတ်လောက် စကော့တလန်မှာဆက်လက် နေထိုင်မယ့်ပုံ ရတယ်လို့ နီကိုလပ် ဝစ်ချဲလ် ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ အခုအခါ အိမ်ရှေ့စံ မင်းသား စံမြန်းရာ ဘယ်လ်မိုရဲလ် မှာရှိတဲ့ သူ့ကို အနီးကပ်ပြုစု တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ ဝန်ထမ်းတော်တော်များများဟာ သူတို့ နေထိုင်ရာ အိမ်ဂေဟာ အသီးသီးမှာ ခွဲခြားစောင့်ကြည့်မှု ခံယူနေကြရပါပြီ။
ဝေလမင်းသားချားလ်စ်ဟာ မိခင် ဘုရင်မကြီးနဲ့ရော သားတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဝီလျံ၊ ဟယ်ရီ တို့နဲ့ စကားပြောဆို ဆက်သွယ်မှုတွေရှိပြီး ကျန်းကျန်းမာမာပဲလို့ နန်းတော်ထဲကလာတဲ့ သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် - ချားလ်စ် မင်းသား ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရ